२५० वर्षका २५ प्रतिनिधि नेपाली व्यक्तित्वमा प्रचण्ड ! – Janaubhar
प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज ८, २०७४ | 633 Views ||
गणतन्त्र, गिरिजाप्रसाद र प्रचण्ड शीर्षकको कान्तिपुर कोसेलीमा छापिएको प्रा. कृष्ण खनालको विचार :
टीभीमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहँदा मलाई लागेको थियो, उनी धेरै दिनदेखिको धोको सुनाइराखेका थिए । अगाडिका चुनौतीसँग उनी अनभिज्ञ थिएनन्, तर लामो संघर्षको थकान मेट्ने गरी सन्तोषको सास फेरेको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो, उनको अभिव्यक्तिमा । तत्कालै मेरो मनमा एउटा कौतूहल उब्ज्यो— संविधानसभाको चुनावका बेलासम्म पनि ‘बेबी किङ’ को सन्दर्भ उठाइरहेका र जीवनको आठ दशक पार गरेका यी पाका नेताले कहिलेदेखि, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले झैँ, गणतन्त्र नेपालको सपना देखे होलान् ?
राजनीतिको यात्रा अनौठो हुन्छ । विपरीत सिद्धान्त र धारका पात्रहरूबीच पनि सोच्नै नसकिने सहकार्य र सहयात्रा हुन्छ, र भएका छन् । राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही पनि हुँदैन । गिरिजाप्रसादमाथि जति प्रहार गर्न सकिन्छ, २०४७ सालको प्रणालीमाथि त्यही अनुपातमा चोट पर्छ भन्ने रणनीतिक बुझाइ थियो माओवादीको । त्यसैले त उनीहरूको प्रचारबाजी राजाभन्दा गिरिजाप्रसादविरुद्ध केन्द्रित थियो । राजा र माओवादीबीच कसले कसलाई कति उपयोग गर्ने, खेलाउने चाल चलिरहेकाले अन्तत: प्रचण्डका लागि गिरिजाप्रसादसँग हात मिलाउनुको विकल्प रहेन । लोकतन्त्रविरुद्ध उत्रिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई उनको हैसियतमा सीमित गर्न र राजा–माओवादीबीच सम्भावित तालमेल रोक्न गिरिजाप्रसादका लागि पनि माओवादीलाई आफूसँग ‘इन्गेज’ गर्नु जरुरी थियो ।
धेरै भुइँ फुक्दै अत्यन्त सावधानीका साथ प्रारम्भ भएको यी दुई पात्रको सहयात्राले तीन वर्ष पनि नपुग्दै नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्‍यो । तसर्थ गणतन्त्रलाई यी दुवैको साझा सूत्रका रूपमा लिन सकिन्छ । आज गिरिजाप्रसाद हाम्रासामु छैनन् तर प्रचण्डसँगको उनको ‘इन्गेजमेन्ट’ नेपालको राजनीतिमा युगीन महत्त्व सावित भएको छ । २०६२/६३ को आन्दोलनले तय गरेको बाटो हो यो ।
नेपाली राजनीतिको कुनै कुनामा राजतन्त्रको मोह कायम रहनु आश्चर्यको कुरा होइन । फ्रान्समा राजतन्त्र फ्याँकेको दुई शताब्दी नाघिसक्यो तर त्यसको चर्चा अहिले पनि बेलाबखत उठ्छ । अफगानिस्तानमा तालिवानविरुद्ध अमेरिकी कारबाहीपछि त्यहाँको राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा, तीन दशकअघि फ्याँकिसकिएको राजतन्त्रलाई पुन:स्थापना गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । इतिहासको सन्दर्भ कोट्याउँदा नेपालमा पनि राजतन्त्रको चर्चा चलिरहन सक्छ । तर गणतन्त्रको यात्रा अविचलित भइसकेको छ । संघीयता, समावेशितालगायत अहिलेको संविधान र संवैधानिक प्रणालीको औचित्य, उपयोगिता र सफलताको मापक पनि गणतन्त्र नै हो ।
नेपालमा गणतान्त्रिक विचारधाराको इतिहास खासै लामो छैन । कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्तले नै गणतन्त्रवादी हो र यसको स्थापनासँगै नेपालमा गणतन्त्रको सोच प्रारम्भ भएको भन्ने एकथरी व्याख्याको कुनै प्रामाणिक आधार छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठका अभिव्यक्तिहरूमा पनि यो विचारधाराको लक्षण मुखरित भएको पाइन्न । कम्युनिस्ट दस्तावेजहरूमा प्राय: उल्लेख हुने ‘सबैखाले सामन्तवादको अन्त्य गर्ने’ भनेर प्रयोग भएको बीचबचाउको एउटा ‘रेडिमेड’ वाक्यांशलाई गणतन्त्रको सोच भन्न सकिन्न । राजा वा राजतन्त्रको विरोध मात्रलाई पनि गणतन्त्रको सोच मान्न सकिन्न ।
त्यसै बेला मैले ‘देशान्तर’ साप्ताहिकसँगको एउटा लामो संवादमा मुलुकको जनमत गणतन्त्रको पक्षमा आइसक्यो, तर माओवादीले बन्दुक बोकुन्जेल यसले मूर्तरूप लिन सक्दैन भनेर शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्रको अजेन्डा सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको थिएँ । प्रचण्डसँग मेरो संवादको केन्द्रविन्दु पनि त्यही थियो । विश्वसम्मत लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताबाहेकको गणतन्त्र मजस्ता नागरिकहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन भन्ने मेरो कुरा थियो । हामी लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र चाहन्छौं र शान्ति पनि । कहाँ छ दलहरू र स्वतन्त्र नागरिकहरूसँग माओवादीको मिलनविन्दु ? त्यसैमा केन्द्रित थियो त्यो भेटघाट । त्यो भेटमा प्रचण्डकै कुरामा सही थाप्नुबाहेक बाबुराम खासै बोलेनन् । प्रचण्डले पनि उनीहरूले पहिले भन्दै गरेको ‘जनगणतन्त्र’ वा एकदलीय चरित्रको कुनै कम्युनिस्ट गणतन्त्रको कुरा गरेनन् । सोभियत रुसमा बोल्सेभिक क्रान्तिपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति निषेध गर्नु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको गम्भीर त्रुटि थियो भन्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र संरचनामा नै माओवादीले काम गर्ने बताएका थिए ।
मेरो अर्को प्रश्न थियो, ‘त्यसो भए सबैले बुझ्ने गरी लोकतन्त्रको भाषामा तपाईंहरू दुवैको हस्ताक्षरयुक्त अपिल र वक्तव्य किन जारी गर्नुहुन्न ?’ प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘यो बिषयलाई हामी पार्टीबाटै निर्णय गर्दै छौं ।’ उनीहरूको बैठकको तयारी हुँदै रहेछ । त्यसले बहुदलीय लोकतन्त्रमा काम गर्ने नीति पनि पारित गर्‍यो । यसले लोकतन्त्रप्रति विश्वसनीयताको थप वातावरण बनायो ।
Prevरोल्पाका तीन स्रष्टालाई ललितको पुरस्कार
Nextमाओवादीको सङ्घर्षले मात्र कर्णाली प्रदेश बनेको हो –प्रचण्ड